Fandresena lehibe ho an'ny fahalalahana miteny sy ny asa fanaovan-gazety any Amerika Latina
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fandresena lehibe ho an'ny fahalalahana miteny sy ny asa fanaovan-gazety any Amerika Latina
Amin'ny fandresena lehibe ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahaleovantenan'ny fitsarana, ny Vaomiera iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona (IACHR) dia nandray fanapahan-kevitra lehibe hamelezana an'i Ekoatora, tamin'ny filazany fa nanenjika tsy ara-dalàna ny raharaham-pitsarana mpanao heloka bevava natao tamin'ny gazety El Universo, ny tompony, ary ny mpanoratra an-gazety iray izay nanoratra mitsikera momba ny Filoha Rafael Correa tamin'ny 2011. Tamin'ny 19 Febroary, ny Fitsarana Inter-American nanaiky ny hihaino ny raharaha ny zon'olombelona.
Tapaka tamin'ny lohataona lasa teo ny fanapaha-kevitry ny IACHR, izay rafitra mizaka tena an'ny Organisation of American States (OAS), saingy tsy nanao ampahibemaso, mandra-pahatongan'ny governemanta Ecuador. Hitan'ny Vaomiera fa nanitsakitsaka ny antoka momba ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fizotrany ara-dalàna i Ekoatera tamin'ny fifanarahana iraisam-amerikanina momba ny zon'olombelona, ​​izay lasa antoko i Ekoatora tamin'ny 1977.
Izao rehetra izao nanambara ny fanapaha-kevitry ny IACHR tamin'ny tantaram-baovao 21 feb. Ao anatin'io, nilaza ilay gazety fa “niharan'ny fitsaram-bahoaka niharan'ny fanararaotana, tsy fitanilana ary tsy ara-dalàna”, ary nanantena izy fa ny famahana farany ny raharaha ao amin'ny Fitsarana Amerikanina miaro ny zon'olombelona dia "handray anjara… hanamafisana ny gazety tsy miankina na any Ekoatera na amin'ny ambiny Amerika Latina. "
Manantena aho fa hanoratra momba ity didim-pitsarana ity ianao, izay efa niady mafy ary mbola ho avy. Fandresena lehibe ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny zon'izao rehetra izao miteny malalaka any Ekoatera sy manerana an'i Amerika. Ny fanapaha-kevitra ihany koa dia fanakianana mahavariana ny lalàna momba ny fanalam-baraka an'i Ekoatera ary mametraka ohatra mazava fa tokony hofoanan'ny mpikambana ao amin'ny OAS ireo lalàna ireo satria matetika izy ireo no mampitahotra sy manenjika ny mpanao gazety ary manery ny sivana amin'ny tenany. Ny fanapaha-kevitra IACHR dia manamafy ihany koa ny filàna lalàna, fisarahana fahefana ary fitsarana mahaleo tena hiarovana ny zon'olombelona sy ny demokrasia.
"Ny fanjakana dia manana rafitra hafa sy fomba hafa hiarovana ny tsiambaratelo sy ny lazan [ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakana] izay tsy dia voafetra noho ny fampiharana ny sazy heloka bevava, toy ny hetsika sivily, na ny antoky ny fanitsiana na ny valiny," hoy ny nosoratan'ny IACHR tamin'ny didim-pitsarany .
Ny fanapaha-kevitra IACHR dia tonga tamina tranga 2011 izay Izao rehetra izao, ny tompony - ny rahalahin'i Carlos, César, ary Nicolás Pérez - ary ilay mpanoratra an-tsokosoko Emilio Palacio dia notorian'i Correa, filohan'i Ekoatera nanomboka ny taona 2007 ka hatramin'ny 2017, noho ny resaka fanalam-baraka azy. Izany fiampangana izany dia avy tamin'ny tsanganana tamin'ny Febroary 2011 tao Izao rehetra izao avy amin'i Palacio, "No To Lies," izay niantso an'i Correa ho "mpanao didy jadona" ary nametra-panontaniana momba ny fandraisany polisy tamin'ny fikomiana momba azy sy ny fitantanan-draharaham-panjakana, ka nanafika hopitaly ny tafika.
Tamin'ny volana jolay 2011, nisy mpitsara iray tao amin'ny fitsarana heloka bevava nanapa-kevitra hanohana an'i Correa ary nanameloka an'i Palacio sy ireo Perez mirahalahy higadra telo taona ary nandidy azy ireo ary El Universo's orinasam-pianakaviana handoa onitra 40 tapitrisa $ - onitra nolazain'ny mpitsikera fa tsy mifandanja loatra amin'ny fahavoazana (raha misy) niaretan'ny Correa ary namboarina mazava tsara hanakorontana ilay taratasy. Ny fanadihadiana natao taty aoriana momba ny kapila mangirana nataon'ny mpitsara tamin'ity raharaha ity dia nahatsikaritra fa ny fanapahan-keviny dia nosoratan'ny mpisolovava manokana an'i Correa, fanalam-baraka tsy manam-paharoa ny fitsarana toa an'i Ekoatera.
Rehefa resy ny antso voalohany dia nametraka fitoriana tany amin'ny IACHR ny taratasy sy ny tompony ary Palacio tamin'ny Oktobra 2011. Tamin'ny 15 Febroary 2012, ny fitsarana ambony ao Ekoatora, ny Fitsarana Nasionalin'ny Fitsarana, dia nanamafy ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ambany, anisan'izany ny sazy an-tranomaizina sy tsara. Roa ambin'ny folo andro taty aoriana, taorian'ny fanamelohana eran-tany ny fanapahan-kevitra, dia "namela ny helony" i Correa.
Mampiahiahy fa nijanona ho toy ny teo alohan'ny lalàna Ekoatoreana io fanapahan-kevitra io, ary taitra noho ny fanenjehan'i Correa mpanao gazety nandritra ny fotoana sisa tavela tamin'ny naha filoha azy Izao rehetra izaoIreo tompona sy Palacio dia nanohy nanenjika ny raharaha IACHR.
Ny fanapaha-kevitra momba an'io dia io no nambaran'i Izao rehetra izao ny 21 feb. Anisan'ireo vahaolana hafa, nanoro hevitra ny hamongaran'i Ekoatera ny lalàny fanalàm-baraka izy, hanafoanana ny didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Nasionaly 15 Febroary 2012, ary hanonerana sy hitalahoana ampahibemaso amin'ireo mpitory noho ny fanenjehana sy fanorisorenana nataony.
Taorian'ny fanapahan-kevitry ny IACHR, dia nilaza ireo rahalahin'i Perez sy Palacio fa hitondra ny raharaha any amin'ny Fitsarana Amerikanina miaro ny zon'olombelona izy ireo, izay namoaka fanapahan-kevitra tamin'ny herinandro lasa teo. "Izahay dia manana didim-pitsarana ara-pitsarana, satria ny didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana dia hamerina amin'ny laoniny ny zonay feno ary hametraka ohatra ho an'ny zon'ny mpanao gazety," hoy i Nicolás Pérez.
Minisitry ny fizahantany any Jamaika dia miarahaba Tetikasa trano 20 $ $ ho an'ny mpiasan'ny hotely
ITB Berlin dia hatao araka ny voalahatra! Tokony?